. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ရန်ကုန်အလွမ်း @ အလွဲတွေးများ
အလန်းသံကြားလို့ ကမန်းကတမ်း (အလန့်တကြားဆို ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ် ..) ကျမ နှိုးထမိတယ် .. အလုပ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ အသိက ချက်ချင်းဝင်လာတယ် .. ကိုယ့်ဘေးဘီဝဲယာကြည့်လိုက်တော့ ဒါ စင်ကာပူမဟုတ်ဘူး ..
"သြော် .. ကျမ မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ရောက်နေတာပဲ .." ဒီတော့မှ သက်ပြင်းချမိတယ် ..
မနက်စောစော ပဲပြုတ်နဲ့ ဆီနဲ့ ဆားနဲ့ နယ်တဲ့ ထမင်းစားဖို့ ကြံစည်လိုက်တယ် .. ပဲပြုတ်ရောင်းတဲ့ အသံကို နားစွင့်ရင်း ဘုရားပန်းလဲ သောက်တော်ရေလဲ ..
"ပဲပြုတ်" အော်သံကြားတာနဲ့ အိမ်ရှေ့ဝရန်တာ ထွက်လို့ ထုံးစံအတိုင်း "လာပါဦး" ပေါ့ ..
၄ ထပ်တိုက်ကနေ အောက်ဆင်းပြီး ပဲပြုတ်ဝယ်တော့ .. လွန်ခဲ့တဲ နှစ်တော်တော်ကြာကြာကတည်းက မြင်ဘူးနေကျ အဒေါ်ကြီး .. (အင်း .. ဒီ အဒေါ်ကြီးလဲ မပြောင်းလဲသေးပဲကိုး .. အဖွားကြီးပုံ ပေါက်သွားတာကလွဲရင်ပေါ့ ..)
အိမ်စောင့်နတ် ကြည့်မရတဲ့ ကျမက အိမ်မှာလည်း ကြာကြာမနေနိုင်ခဲ့ပြန်ဘူးလေ .. နေထွက်လာတာနဲ့ အိမ်ပြင်ထွက်ဖို့ စိုင်းပြင်းလို့ပေါ့ ..
သူငယ်ချင်းအိမ်သွားမယ် .. စားချင်တာတွေ လျှောက်သွားပြီးဝယ်စားမယ် စိတ်ကူးနဲ့ သူငယ်ချင်းအိမ်ကို ခြေဦးလှည့်လိုက်တယ် .. လမ်းလျှောက်ဖို့ဆိုလည်း တယောက်တည်းဆို သိပ်ပျင်းတတ်တော့ လမ်းထပ်က ဟိုး ငယ်ငယ်တုန်းက စီးနေကျ ဆိုက်ကားဂိတ်ကို ဦးတည်လိုက်တယ် ..
"သမီး" ခေါ်သံကြားလို့ လှည့်ကြည့်မိတော့ အိုး .. ကျောင်းတက်တုန်းတည်းက ငှားစီးနေကျ ဆိုက်ကားနင်းတဲ့ ဦးလေးကြီး .. (တော်တော်အိုစာနေပြီပဲ) လို့ စိတ်ထဲတွေးမိတယ် .. မပြောင်းမလဲ နေ့စဉ် ချီတက်နေဆဲပေါ့ .. ဒါလည်း မပြောင်းလဲခြင်းတခုထဲ ထည့်နိုင်ပေမယ့် ပြောင်းလဲခြင်းကတော့ ဆိုက်ကားခ ..
ငယ်ငယ်တည်းက မောင်နှမနှစ်ယောက် ဆိုက်ကားစီးစီးပြီးသွားတာကို ပြန်အမှတ်ရမိတယ် .. အဲဒီအချိန်က ကျမက ၆ တန်း ၇ တန်း .. ဆိုက်ကားခဆိုတာ အလွန်ဆုံးရှိရင် ၅၀ ၁၀၀ ကျပ်ပေါ့ .. ခု ဈေးမေးမိတော့ ၅၀၀ .. (ဒါက ပြောင်းလဲခြင်း တမျိုး)
သူငယ်ချင်းအိမ်ရောက်တော့ သီချင်းဖွင့်မယ် အလုပ်မှာ မီးက ပျက်နေပါသတဲ့ .. (ဒါက မပြောင်းလဲခြင်း) ဘယ်ချိန်လာမလဲ ဆိုတာတော့ မိုးနတ်မင်းကြီးတောင်မှ သိနိုင်မယ် မထင် ..
ရန်ကုန်မြို့ထဲ ထွက်လာခဲ့တော့ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ လူတွေ ကားတွေ .. ကားတွေ အများကြီး ပိုင်ကြတော့ ပိုက်ဆံ ရှိသူတွေ ပေါတယ် ထင်ပ .. ကားတွေပေါ်ကနေ ကွမ်းတပျစ်ပျစ် ထွေးနေသူတွေ မြင်မိတော့ ကားပေါ်မှာသာ ထိုင်နေကြတယ် .. စိတ်ဓါတ်တွေက စည်းကမ်းမရှိ ..
မြို့ထဲမှာလည်း လမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းမှာ မုန့်ဆိုင်လေးတွေ .. အိမ်အောက်ထပ်တွေ တော်တော်များများမှာ ဆိုင်ခန်းလေးတွေ .. သေးသေး ကြီးကြီး ပစ္စည်းစုံ စတိုးဆိုင်တွေ .. လမ်းဘေးမုန့်ဆိုင်တွေ .. ပြည့်ကျပ်ညပ်လို့ လမ်းသွားတာတောင် လမ်းမပေါ် ဆင်းသွားရတဲ့ အဖြစ် .. ဆိုင်ခင်းတာတွေတောင် လမ်းမပေါ်ရောက်နေတာ လူတွေ လမ်းပေါ်ဆင်းလျှောက်တာ မထူးဆန်းပါဘူးလေ .. နေရာတိုင်းမှာ တွေ့ရတဲ့ ကွမ်းသွေးတွေကလည်း အော်ဂလီဆန်စရာ ..
တိုက်မြင့်မြင့်တွေ ပေါလာတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ .. လူတွေ တဲပေါ်ကနေ တိုက်ပေါ်ရောက်ကုန်ကြတယ် .. ၀မ်းသာစရာပေါ့ ..
အော်ဟစ်ဆဲဆိုသံတွေ ကြားလို့ ကြည့်မိတော့ အိမ်အောက်ထပ်က လမ်းဘေးဈေးသည်နဲ့ ရန်ပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပေါ်က အမျိုးသမီး တဦး .. လူတွေ တဲပေါ်ကနေ တိုက်ပေါ်ရောက်ပြီး စိတ်ဓါတ်တွေ မြင့်မလာကြဘူး ..
စိတ်ဓါတ်ကျစွာနဲ့ စူပါမားကတ်တခုဝင်မိတော့ နောက်ကနေ လိုက်လံစောင့်ကြည့်ခြင်းကို ခံရတော့တာပဲ .. ပစ္စည်းတောင်းကြည့်ရင် စိတ်မပါ လက်မပါ ဆောင့်အောင်ပေးတဲ့ ၀န်ထမ်းနဲ့ .. ပစ္စည်းတောင်းကြည့်တာကို မကြားသလို စကားပြော မပျက်နဲ့ ၀န်ထမ်းနဲ့ .. ရောင်းကောင်းဝယ်ကောင်းပါပဲ ..
မုန့်ဆိုင်တဆိုင် ၀င်ထိုင်ဖြစ်တော့ လူတွေမှ အပြည့် .. ဒီလိုဆိုတော့လည်း စီးပွားရေးမကောင်းဘူးဆိုတာ ဘယ်ဟုတ်နိုင်ပါ့မလဲ ..
ညနေစောင်းချိန်မှာတော့ အမှောင်ကမ္ဘာတည်း တပ်ခေါက် ပြန်ခဲ့လေရဲ့ .. ဒါဟာလည်း ရန်ကုန်ရဲ့ သင်္ကေတ တခု ..
မီးပျက်လို့ ရာသီဥတုကလည်း ပူလို့ အိမ်ရှေ့မှာ ခုံလေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ အတင်းအဖျင်းပြောနေကြသူတွေ ..
အိမ်အောက်လေးတွေမှာ ဈေးဆိုင်လေးတွေနဲ့ နောက်များဆိုရင် ပိုက်ဆံနဲ့ မုန့်မ၀ယ်ပဲ ပစ္စည်းချင်း လဲစားတဲ့ ခေတ်များ ပြန်ရောက်လေမလား ..
လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်က ရန်ကုန် .. ခုထိဒီပုံပါပဲ .. မရိုးနိုင်တဲ့ မြင်ကွင်း .. လူတွေရဲ့ ရှင်သန်နေမှုတွေ .. အားလုံးဟာ ပုံမှန်ပါပဲ .. အားလုံးလည်း နေသားတကျ .. ကျမ အတွေးတွေသာ လွဲနေတာနေမှာပါ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 7/18/2009 03:47:00 AM